Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga & Waxa Ay Wargeysyada Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Salaasa Ah - GOOL24.NET
January 25, 2022 Apdihakem Omer Adam
Aston Villa tababaraheeda Steven Gerrard ayaa xiisaynaya daafaca kooxdiisii Liverpool ee Joe Gomez. (Football Insider)
Manchester United ayaa kamida kooxo indho-indhayn ku sameeyay garabka FC Porto ee Luis Diaz oo ciyaarayay toddobaadkan. Atletico Madrid iyo Borussia Dortmund ayaa sidoo kale xiisaynaya xiddiga Colombian-ka ah oo xilli ciyaareedkan 14 gool kasoo dhaliyay horyaalka Primeira Liga. (O Jogo – in Portuguese)
Newcastle United ayaa xiisaynaysa khadka dhexe ee Jesse Lingard oo Man United ka tirsan iyo xiddiga Brighton ee Yves Bissouma. (Mirror)
Nice ayaa sidoo kale xiisaynaysa saxeexa Lingard oo lala xidhiidhinayo markale West Ham. (Foot Mercato – in French)
Newcastle ayaa furtay wadahadalo ay qaab amaah ah Dele Alli kaga soo qaadanayso kooxdaTottenham. (Telegraph – subscription required)
Bayern Munich ayaa xiisaynaysa daafaca Chelsea ee Andreas Christensen kaddib markii Niklas Sule uu diiday inuu heshiis kordhin u sameeyo. (Goal)
Manchester City iyo Liverpool ayaa kooxda PSV Eindhoven wadahadalo kala furay garabka weerar ee Cody Gakpo. (Voetbal International – in Dutch)
Dusan Vlahovic ayaa u sheegay Fiorentina inuu doonayo ku biirista kooxda Juventus. (90 Min)
Arsenal ayaa ka fikiraysa saxeexa weeraryahanada kala ah Alexander Isak oo Real Sociedad ka tirsan, Lille 22 sano jirkeeda Jonathan David iyo dhaliyaha Everton ee Dominic Calvert-Lewin maadaama oo ay xumaatay fursadeeda saxeexa Vlahovic oo Fiorentina ka tirsani. (London Evening Standard)
Arsenal ayay tahay inay bixiso 70-ka Milyan ee pound ee lagu jabin karo heshiiska Isak ee Real Sociedad haddiiba ay saxeexiisa doonayaan. (Express)
Arsenal tababaraheeda Mikel Arteta ayaa taageere weyn u ah Calvert-Lewin balse isku dayga saxeexiisa ayaysan Gunners xagaaga kahor samayn doonin. (Star)
Lix kamida kooxaha waaweyn ee Yurub ayaa doonaya saxeexa Pierre-Emerick Aubameyang oo banaanka ka ah qorshayaasha Arteta ee Arsenal. (Mirror)
Aubameyang ayaa cadeeyay inuusan xiisaynayn u wareegista horyaalka Saudi Arabia oo ay laba kooxood ka doonayeen. (Star)
Tottenham ayaa kalsooni ku qabta inay 20 Milyan oo pound kula saxeexan doonto garabka Wolves ee Adama Traore, Wolves ayaa 25 Milyan ku doonaysa iibka 25 sano jirkaas heshiiskiisu dhacayo xagaaga 2023. (Sky Sports)
Tottenham ayaa dhinaca kale wadahadalo la furtay kooxda Angers oo ay ka doonayaan saxeexa 18 sano jirka Mohamed-Ali Cho oo hore usoo maray kooxaha Everton iyo Paris St-Germain. (Football Insider)
]Bayern Munich ayaa xidhiidh la samaysay wakiilka khadka dhexe ee Barcelona ee Frenkie de Jong iyaga oo doonaya inay saxeexa 24 sano jirkaas ku garaacaan kooxaha kala ah Chelsea, Manchester City iyo PSG. (Marca)
Borussia Dortmund ayaa dhigeeda Red Bull Salzburg la furtay wadahadalo ay 40 Milyan oo euro kaga doonayaan weeraryahan Karim Adeyemi. (Sky Sport – in German)